National Security နဲ့ဘာနဲ့မှလဲယူလို့မရပါဘူး၊ Development နဲ့လဲယူလို့လဲမရပါဘူး၊ by Ohn Mar Oo « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » National Security နဲ့ဘာနဲ့မှလဲယူလို့မရပါဘူး၊ Development နဲ့လဲယူလို့လဲမရပါဘူး၊ by Ohn Mar Oo
National Security နဲ့ဘာနဲ့မှလဲယူလို့မရပါဘူး၊ Development နဲ့လဲယူလို့လဲမရပါဘူး၊ by Ohn Mar Oo
National Security နဲ့ဘာနဲ့မှလဲယူလို့မရပါဘူး၊ Development နဲ့လဲယူလို့လဲမရပါဘူး၊ Develop ဖြစ်လာရင်ဒါတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်အကြီးအကျယ်မှာ:သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့အမေရိကားမှာ ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပါ၊ဒီကနေ့ကျွန်မတို့နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံတ…ကာစံနှုန်းကိုမြန်မာပြည်အခြေအနေနဲ့ချိန်ထိုးလုပ်ကိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ နောင်တချိန်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီလိုမျိုးတချိန်လုံးပေါက်ကွဲသံတွေကြားရရင်ဒီလိုမျိုးကိုမကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်သမိုင်းတွင်မှာပါ။အကျိုးဆက်အဖြစ်မြန်မာပြည်မှာမျိုးဆက်တွေအဆင့်ဆင့်ကျိန်စာအနေနဲ့တသက်လုံးမလုံမခြုံနေသွားရတော့မှာပါ။ဒါဟာ National Security အဆင့်ကာကွယ်သင့်တာကာကွယ်ဖို့ဘက်ပေါင်းစုံကနည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာအာဏာရဖို့၊နေရာရဖို့၊ငွေကြေးရဖို့ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံရေးကစားကြလေ့ရှိပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူတွေကသိထားရမဲ့အသိ
သိသင့်တယ်ထင်လို့ဝေမျပေးလိုက်ပါတယ်။ဆီးရီးယားသူပုံခေါင်းဆောင် Sheikh Bilal al-Masri ကပြောထားတာပါ၊မြန်မာပြည်ကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်တွေကိုသွင်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါတဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေတဦးချင်းစီကသိထားဖို့အတွက်၊ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပါ။ဒါဟာအမုန်းပွါးဖို့မဟုတ်သလိုလုပ်ဆောင်သင့်တာတွေကိုပြည်သူတွေကအုပ်ချုပ်သူအစိုးရကိုထောက်ပြပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Source: https://now.mmedia.me/lb/en/nownews/syrian-islamists-set-sight-on-myanmar–See More
You, Jutta Pflueg, Kalkal Lay, Sandy Thin Mar Oo and 81 others like this.
Naymyo Mdy အနော်ရထာမင်းကြီးဟာသာသနာ
Yesterday at 5:24am · Like · 4
Ko Naing Naing Win ကောင်းတယ် shareလိုက်ပြီ
Myo Thu ကူးညီပေးကြပါ သူငယ်ချင်းတို့
← Facebook Knowledge Sharing	​မြေငလျင်များအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား ? ရေးသားသူ- အားမာန်၊ ထွန်းခိုင် →